VIRURL: Votoatiny tohanan'ny fizarana sy fizarana sosialy karama | Martech Zone
VIRURL: Votoatin'ny mpanohana sy fizarana sosialy karama
Alahady, Novambra 25, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Izahay dia mandoa vola amin'ny fizarana atiny sasany ary mandoa ny doka eny sy amin'ny. Zava-dehibe ny hampitana ny atiny eo alohan'ny mpihaino marobe - ary hitantsika fa ny fametrahana avo lenta dia manome antsika mpitsidika mahafinaritra sy mifandraika. Rehefa manatsara ny fampiroboroboana karama ny Facebook, Google dia manohy mampihena ny fananana voajanahary, ary ny motera fikarohana dia mbola miady amin'ny paikadin'ny matihanina SEO manambaka, ireo mpamatsy atiny dia mihodina mba handoa vola kely fotsiny amin'ny filalaovana safidy hafa kely.
Mandiso fanantenana ahy ny nilazako izany. Tiako ny democratization an'ny Internet sy ny heriny hamokarana valiny ho an'ilay zazalahy kely izay tsy voatery ho afaka nifampiresaka tamin'ny fifaninanana lehibe. Androany, mbola azo atao ny ana orinasa kely iray manao azy ho lehibe amin'ny Internet - fa satria ny fananan'ny Internet dia mitady hanana vola isaky ny manararaotra dia mihena ireo fotoana ireo ary mitombo isa hatrany ny tombam-bidim-pisondrotana karama.
VIRURL dia paikady hafa mihitsy. Raha tokony handoa ireo loharanom-pahalalana ireo hampiroboroboana ny mombamomba anao fotsiny ny VIRURL dia manome ny fotoana hafa ahazoan'ireo mpisintaka sosialy karama hizara rohy amin'ireo tambajotran'izy ireo.
VIRURL mizara lahatsoratra sy horonan-tsary tohanan'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny tranonkala malaza sy olona manana fahefana. Ny sehatray manompo tena dia mamela ireo mpamokatra haino aman-jery an-tserasera hamorona fanentanana dokambarotra zanatany amin'ny tsindry iray Ny doka VIRURL dia miaraka amina tambajotran'ireo mpanonta tranonkala sy mpanentana media sosialy midadasika sy mihabetsaka, manamafy ny atin'ny mpiara-miasa amin'ny olona be fatratra.
Ny atiny VIRURL dia tohanan'ny vondrona mpampiasa roa:
Mpanonta tranokala, izay mampiantrano ny widget VIRURL ao amin'ny tranokalany hanompo ny mpihaino azy amin'ny atiny misy tohana mifanaraka amin'ny tambajotra VIRURL.
Ireo influencer ara-tsosialy, izay mizara rohy VIRURL amin'ireo mpanaraka haino aman-jery sosialy sy mpamaky bilaogy. VIRURL dia nilaza fa manana influencer 110,000 nisoratra anarana.
Fanamarihana: Izahay dia mizaha toetra ny VIRURL ary nampiasa ny Rohy Sponsored tamin'ity lahatsoratra ity.
Tags: karama tiaretweetfizarana karamafomba fijery voaloavirurl
Ampio Edit-In-Place amin'ny rafitra fitantanana atiny
25 Nov 2012 tamin'ny 11:26 PM
Misaotra anao hatreto amin'ny fampidiranao ny VIRURL.